Econsultancy na-ewepụta B2B Content Marketing Guide | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 6, 2011 Sunday, July 7, 2013 Douglas Karr
May nwere ike ịchọpụtala na anyị mere obere ihe ịchọ mma nke igodo anyị kachasị na saịtị ahụ… ịde blọgụ ka eji dochie ya ugbu a ahịa ahịa. Yiri na ikike ndi agbanwe agbanwe ire ere ahịa ọzọ. Oge a, m masịrị mgbanwe ahụ. Okwu ịde blọgụ nọ na-ochie… na jikọtara ya na ndị ọzọ niile na-ekesa na nkwalite ọwa, ọ n'ezie aghọwo otu akụkụ nke mkpokọta atụmatụ.
Nnukwu folks na Econsultancy weputara onye ndu ozo nke ahia ahia (B2B): B2B Ahịa Ahịa: Formdị, Nkesa na mmesho - Iwuli okpokoro maka Usoro ahia ahia B2B gi.
Ntuziaka ahụ na-elekwasị anya na ogidi atọ nke ịzụ ahịa ọdịnaya:
Formatsdị ọdịnaya - Nke a metụtara ụdị ọdịnaya dị iche iche dị na ngwa agha ahịa, gụnyere ederede, okwu na visual.
Nkesa ọdịnaya - Nke a metụtara ọwa ahịa ị nwere maka ibipụta ma kesaa ọdịnaya gị iji nweta mgbasa ozi kachasị.
Ihe ọdịnaya - Nke a metụtara ihe nyocha ihe eji enyere gị aka iji nyere aka chọpụta mmetụta ọdịnaya gị na-enwe na e-commerce Key arụmọrụ egosi (KPIs) dị ka okporo ụzọ na ntụgharị na mgbe ahụ arụmọrụ dị mma iji melite ndị KPI ahụ.
Ntuziaka ahụ na-enyekwa nghọta banyere uru azụmahịa dị, gụnyere ịmara ụdị ahịa, nnweta ndị ahịa, ịzụ ahịa saịtị na idu ndu, njikwa ndu, njide ndị ahịa, na iduzi echiche. M hụrụ eziokwu ahụ n'anya njigide ndị ahịa dị elu n'ọtụtụ dị ka ihe mgbaru ọsọ nhazi, mana enwere m ndakpọ olileanya na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị ahụ ochichi echiche dị ka isi ihe mgbaru ọsọ nke B2B Content Marketing. Ikekwe ọ bụ ya mere anyị ji ahụ ọtụtụ ihe dị na crappy n'ebe ahụ!
Download a nlele nke B2B Ọdịnaya Ahịa Kachasị Mma Nduzi ebe a iji hụ ndepụta zuru ezu na omimi nke ndu. Debanye na Econsultancy n'iji njikọ njikọ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ndu a na ọtụtụ ndị ọzọ n'ime afọ.
Tags: b2bb2b ịde blọgụb2b ahia ahiab2b nkesanha b2b
Daalụ, Maazị Ọrụ